वेपत्ता अधिकृत ओमराज पौडेलको शव फेला परेको ठाउँ…, तनहुँदेखि पोखरा ल्याइयो (भिडियो सहित) – BIG FM 101.2 MHz
Home » स्थानीय » वेपत्ता अधिकृत ओमराज पौडेलको शव फेला परेको ठाउँ…, तनहुँदेखि पोखरा ल्याइयो (भिडियो सहित)
वेपत्ता अधिकृत ओमराज पौडेलको शव फेला परेको ठाउँ…, तनहुँदेखि पोखरा ल्याइयो (भिडियो सहित)
तनहुँ, ३० असार । गत असार ९ गतेदेखि बेपत्ता पोखरा महानगरपालिकाका बरिष्ठ अधिकृत ४९ वर्षिय ओमराज पौडेलको शव २२ दिनमा शनिबार बिहान भेटियो ।
तनहुँको भिमाद नगरपालिका वडा नं. ६ मा पर्ने सेती नदीको किनारमा शव यस्तो अवस्थामा भेटिएको हो । विहान करिव ९ बजेतिर स्थानीयले देखेपछि प्रहरीलाई खबर गरेका थिए । भिमाद बजारको ठिक तलपट्टि नदी किनारमा शव फेला परेको थियो । शव बाढी रोक्न लगाइएको ढुंगाको जालीले किनारमा उतारेको थियो । अनुहारको भाग ठोक्किएर फुटेको, दाँत झरेको अवस्थामा थियो ।
पोखरा महानगरपालिकाका बेपत्ता वरिष्ठ अधिकृत ओमराज पौडेलको शव यस्तो अवस्थामा
पोखरा महानगरपालिकाका बेपत्ता वरिष्ठ अधिकृत ओमराज पौडेलको शव यस्तो अवस्थामा Video: MeroPati TV, Org. Link: > https://youtu.be/4XL3fb_H52w
Posted by GandakNews on Saturday, July 14, 2018
मुचुल्का भएपछि पोष्टमार्टमका लागि पोखरा ल्याइयो । शव बुझ्न ओमराजका आफन्त भिमाद नै पुगे । असार ९ गते मनिङ वाकका क्रममा विहान ५ः३० बजेदेखि ओमराज बेपत्ता थिए ।
घरबाट सरसफाइको कार्यक्रम जाने भन्दै उनी निस्किएका थिए । पौडेलले घर छाड्नु अघि श्रीमतीलाई सम्बोधन गरेर एउटा नोट समेत छाडेका थिए । उक्त नोटमा श्रीमतीलाई खुसी राख्न नसकेको र आगामी दिनमा साथ दिन नसक्ने उल्लेख गर्नुका साथै सन्ततीलाई सम्बोधन गरेर ३ फूललाई राम्ररी हेरविचार गर्न श्रीमतीलाई अनुरोध गर्दै अलबिदा लेखेको प्रहरीले सार्वजनिक गरेको थियो ।
पत्रमा लेखिएको छ ‘कठै उर्मिला, तिमिले यति धेरै माया दिँदा पनि जीवनभर साथ दिन सकिनँ । ३ वटा कोपिला तिम्रो जिम्मामा छाडेर जाँदैछु । राम्रोसँग बसे चारै जना । अलबिदा ।’ उनका एक श्रीमती, दुई छोरा र १ छोरी छन् ।